Safe mode Error ~ ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး)
Home » Android App » Safe mode Error
Saturday, December 21, 2013 Android App
ကျွန်တော် Safe mode ပြဿနာလေး အကြောင်းပြေားပြချင်ပါတယ် ဒါကတော့ သိပ်တော့အထူးအဆန်းကြီး မဟုတ်ပေမယ့် မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ အခုတလော Y511-U00 ဖုန်းတွေဟာ ဈေးအရမ်းချိုးပြီးတော့ လူအသုံးပြုများနေပါတယ် ဒါပေမယ့် တော်တော်လေး ကြောင်ကြောင်ပါတယ် Restart မချတတ်ရင် စမ်းမလုပ်ကြပါနဲ့ တိုင်ပတ်မယ်
ဖုန်းအမျိုးစားတွေပါ ဈေးနုန်းက 80000 ကျပ်ပဲရှိပါတယ် ကျွန်တော်ဆီကို အဲ့ဒီဖုန်းတွေအများလာပြီ တော်တော်ဒုက္ခပေးပါတယ် အသုံးပြုနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများ သိစေချင်လို့ပါ Safe mode ကိုဝင်ချင်ရင်တော့ Power ပိတ်တဲ့အခါ Power မခလုပ်လေးကို ကြာကြာလေးဖိထားပါ Power Off ဆိုတာလေးပေါ်လာရင်တော့ အဲ့ဒါလေးကို ကြာကြာလေဖိထားလိုက်ပါ ပိတ်ချင်ရင်တော့ Shut down လို့ပြပါတယ် Safe mode ဝင်ချင်ရင်တော့ Reboot to safe mode လိလို့ပေါ်ပါတယ် ပေါ်နေလို့ ဖျောက်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ Phone မှာ software/Game တွေအထည့်များပြီး Force Close တွေပေါ်၊ Uninstall လုပ်ဖို့ကလဲ ဖုန်းက ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်၊ ဟိုဟာနှိပ်လဲမရ ဒီဟာနှိပ်လဲမရတဲ့သူတွေ အတွက်။ Safe Mode ထဲဝင်ပြီး Uninstall လုပ်ကြည့်ပါ။ Safe Mode ထဲမှာ System အတွက် လိုအပ်တာတွေပဲ အလုပ် လုပ်ပါတယ်။ ထပ်ပြီးထည့်ထားတဲ့ software/Game တွေကအလုပ် မလုပ်တော့ပါဘူး။ App Drawer ထဲမှာလဲ မတွေ့ ရတော့ပါဘူး။ Setting ထဲဝင်ပြီး Uninstall လုပ်ကြည့်ပါ။ ကွန်ပျူတာက Windows Safe Mode နဲ့ သဘော သဘာဝ တူပါတယ်။ ဒီ error က Vol – ကြောင့်ဖြစ်တာပါ …..နောက်ဆုံး ဖန်းဝဲ ပြန်တင်တာတောင် Safe Mode နဲ့ ပဲ ပြန်တက်လာပါတယ် ….အဲဒါနဲ့ ဟိုမေးဒီမေးဟိုကြည့်ဒီကြည့် နဲ့ပဲ Safe Mode ပျောက်သွားတာပါ
၂ ပြန်တပ်ပြီးပါဝါဖွင့် W 3G ဆိုပေါ်လာခဲ့ရင် vol – လေးဖိထားလိုက်ပါ …..နောက်ဆုံးlock screen ရောက်သွားခဲ့ရင် safe mode ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါ Safe Mode ကနေ
အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်း ရဲ့ Factory Default Settings ကို Restore
လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ Apps တွေအားလုံးကိုလည်း ပြန်ပြီး Install လုပ်ရမှာပါ။ Factory Default Settings ကို Reset လုပ်ဖို့ အတွက် Settings ထဲကိုသွားပြီး Backup & Reset ကိုနှိပ်ပါ။ Factory Data Reset ကိုနှိပ်ပါ။ပြီးရင် ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းဆက်လုပ်သွားပါ။
3. When the screen turns up keep tapping the soft Menu key that is left to the Home button till the device
2. Press the Power key to restart it.
3. When you see the Samsung Logo screen, press and hold the Volume Down key till the device boots up.
1. Turn fastboot off in your power settings.
4. Once you see the HTC splash screen, press and hold the Volume Up key till the phone boots up in Safe
If you gotaGoogle Nexus device or have installed an AOSP, AOKP or CyanogenMod based custom ROM, you
can get into Safe Mode as described below. This method works on most devices with Jelly Bean.
1. Press & hold Power button
2. It’ll bring up Power off/Reboot options
3. Then press & hold the “Power Off” option
4. It’ll ask for your confirmation to boot device into Safe Mode.
5. Tap OK button.
3. When the Motorola splash screen appears, press and hold Volume Up /Down keys simultaneously.
4. Continue to hold the Volume Up & Down keys until Safe mode appears in the lower left corner of the
***How to Exit Safe Mode:***
Exiting Safe Mode on most Android devices is as easy as powering off and then turning them on. However,
there areafew devices on which you will have to hold the button combination you used to enter Safe
Mode to exit it. There are some other devices that require you to press and hold the volume down key to
Orginal Link: http://www.droidviews.com/how-to ... ces-into-safe-mode/
PC မှ Viber /massage အသံတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သံ...
Huawei G606-T00，Android 4.0，V100R001CHSC01B021 Fir...
Android application မြန်မာမှုပြုလုပ်နည်း စာအုပ်လေးပ...
Drum Kit Music .apk
Any Video Converter.apk
All CALL BUSY.APK
APP TO SD.APK